World Tourism Today na -emekwa mmemme ụbọchị anwụnta ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » World Tourism Today na -emekwa mmemme ụbọchị anwụnta ụwa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Education • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • India na -agbasa ozi ọma • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Mgbe a jụrụ ma ịba nwere mmetụta ọjọọ na ndị njem nlegharị anya na South Africa, 60% nke ndị nwere ọnụ bụ ndị a gbara ajụjụ ọnụ n'oge ịba n'oge na -adịbeghị anya kwenyere ajụjụ ahụ, na -egosi na ịba nwere mmetụta na -adịghị mma na ọnụ ọgụgụ ndị njem na -eleta mpaghara ahụ. , Ọgọst 20 ka a na -eme dịka ụbọchị anwụnta ụwa iji mee ka ndị mmadụ mata maka ọrịa na ọrịa anwụnta na -ebute.
Fraịde, Ọgọst 20 bụ ụbọchị anwụnta ụwa, ihe kpatara njem njem na ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem iji cheta ma gaa n'ihu n'ọgụ a na -ebuso iyi egwu a.
Emere ụbọchị a iji gbaa ndị mmadụ ume ka ha mata ihe iyi egwu na-abịanụ nke ọrịa na-ebute anwụnta dị ka ịba & ahụ ọkụ dengue.
Ndị mmadụ kwesịrị ịgbaso usoro mgbochi iji chebe onwe ha pụọ ​​n'ọrịa anwụnta na -amụ ebe ọ bụla n'ụwa.
Kwa afọ na ụbọchị anwụnta ụwa, ụwa na -echeta ncheta chọpụtara anwụnta Anopheles bụ vektọ na -ebufe ịba n'etiti mmadụ. Nchọpụta a dị mkpa, nke Sir Ronald Ross mere na 1897, ghọrọ ntọala maka ọtụtụ mmemme ịchịkwa ịba gụnyere Indoor Residual Spraying and Insecticide Treated Net yana mmepe ọgwụ ọgwụ ịba na chemoprophylaxis.
Ememe a bụ ka nchọpụta a siri gbanwee usoro akụkọ ahụike.
Agbanyeghị na a zọpụtara ọtụtụ nde mmadụ n'ihi otu nchọpụta a, ịba na -aga n'ihu na -ebute mba dị iche iche nnukwu ibu, na -eme atụmatụ ọnwụ 409,000 ọrịa butere n'ụwa niile na 2019 naanị.
N'afọ 2014, enweghị ọgwụgwọ nje na-ebute anwụnta na njem nlegharị anya na Caribbean achọpụtara na Caribbean wee mepụta ezigbo ihe iyi egwu maka njem.
Taa, ndị na-eme nchọpụta na ndị ọkà mmụta sayensị Target Malaria n'ụwa niile na-aga n'ihu na-amụ anwụnta na-ebu ịba na mbọ iji nọrọ n'ihu ihe nje na-aga n'ihu na-achọta ụzọ ọhụrụ na ụzọ ka mma isi luso ọrịa a ọgụ.
Akụkọ na ụbọchị anwụnta ụwa na -abịa site na mba ebe anwụnta bụ ezigbo ihe iyi egwu maka ahụike na nchekwa dị na India.
N'ụbọchị ncheta anwụnta nke ụwa, a na -agbasa ozi site na soshal midia gburugburu mkpa ọ dị ichebe anwụnta.
Site na akara mkpado nke 'Gbuo ụmụ ahụhụ, gbuo ọrịa', ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụhụ na India na-ekwe nkwa ime ka ụlọ ọ bụla ghara inwe ọrịa.
Companylọ ọrụ ahụ na -eme mmemme mmata ndị ahịa yana mkparịta ụka na mmekorita ya na ọwa ozi mgbasa ozi.
Site na mmemme EMBED (Mwepụ ọrịa anwụnta na-ebute anwụnta), GCPL enweela ọganihu dị mma na mgbochi ịba na ọkwa ahịhịa.
N’afọ 2015, a malitere mmemme a na Madhya Pradesh na mmekorita ya na Mịnịsta ahụike na ọdịmma ezinụlọ iji kpochapụ ịba site n’obodo ndị dị elu.
Ihe mmemme a ekpuchila ihe karịrị obodo 800 na mpaghara iri na otu nke Madhya Pradesh, Uttar Pradesh na Chhattisgarh. GCPL jikọrọ aka na ndị nwere mmekọ wee mee mmemme mgbanwe omume akparamagwa na mpaghara nwere nnukwu nje kwa afọ ebe ihe ize ndụ mbufe ịba dị.
Nke a butere 24% n'ime obodo ime obodo 824 na-akọpụta ọrịa ịba ka ọ na-erule ngwụsị FY0-20.
Obodo ndị fọdụrụ nọ n'afọ nke 1 nke itinye aka na ebumnuche ya bụ ime ka ha ghara ịba ịba n'afọ nke abụọ na afọ 2.
GCPL, na mgbakwunye, gbasaa Pọtụfoliyo na njikwa dengue na njikwa na obodo 4 (Bhopal, Gwalior, Lucknow, na Kanpur) ma na -enyekwa mmemme nchịkwa Vector Borne Disease Control (NVBDCP) n'okpuru Ngalaba Ahụike & Ezinaụlọ GOI. Ọdịmma.
N'ikwu banyere oge ahụ, Onye isi oche Sunil Kataria kwuru, "Na GCPL, mbọ anyị bụ ime ka India nwee ahụike, nchekwa, na enweghị ọrịa na-ebute ọrịa. Kemgbe oria ojoo COVID-19, ọ dịla mkpa ịmụrụ anya n'ihi egwu abụọ nke ọrịa na-ebute anwụnta na nje. N'ụbọchị anwụnta ụwa, anyị na -agba onye ọ bụla ume ka ọ were usoro iji gbochie ịba ma ọ bụ dengue.
Anyị na -agbasi mbọ ike ịkwalite ụdịrị atụmatụ ndị a ga -enyere ndị mmadụ aka ịmata na ụzọ dị mkpa iji luso iyi egwu anwụnta ahụ ọgụ.
Sistemụ Njikwa Ahụike (HMIS), dashboard data nke National Health Mission (NHM), kọrọ puku kwuru puku ọrịa ịba na ọrịa dengue na India n'etiti Eprel 2020 ruo Mach 2021.
Ewezuga mmetụta ahụike, ibu ọrụ mmekọrịta ọha na eze ma ọ bụ mmefu kwa afọ na mba n'ihi ịba na dengue dị elu nke ukwuu.
N'ịghọta nchegbu ndị a, GCPL site na atụmatụ mmekọrịta ya na ngwaahịa ọhụrụ na-achọ ịkwalite mgbanwe omume n'etiti ndị mmadụ iji chebe onwe ha pụọ ​​n'ọrịa anwụnta na-ebute.
Ndụmọdụ. Jayant Deshpande, odeakwụkwọ na -asọpụrụ, Association Control Control Insect Association (HICA) - Otu ụlọ ọrụ na -ahụ maka ụlọ na -ahụ maka ụmụ ahụhụ, kwuru, sị, “Iji gboo ihe ize ndụ nke anwụnta na -ebute, mmadụ ga -eji naanị usoro kwesịrị ekwesị na ntụkwasị obi.
Ngwaahịa juputara n'ahịa juputara dịka osisi na -esi ísì ọjọọ nke anwụnta na -enweghị akara nke nwere ihe ndị na -emerụ ahụ.
Ngwaahịa ndị a sitere n'aka ndị na -eme ihere nwere ike ịdị ọnụ ala mana ha agabigaghị usoro nrụpụta a haziri ahazi na nyocha nke ọma na mpaghara nchekwa nke akpụkpọ ahụ, anya na akụkụ iku ume nke enyere ngwaahịa ngwaahịa ahụhụ niile n'ụlọ.
Ihe nsure ọkụ na -esi anwụnta na -ere anwụrụ ọkụ na -arapara n'ụkpụrụ na -adịghị mma, a naghị anwalekwa ha na ihe ndị m kwuru na mbụ. Ojiji ọ bụla nke osisi nsure ọkụ na -ere anwụnta na -akwadoghị dị oke egwu maka ahụike ụmụ amaala n'ofe afọ. Anyị na-akwado onye ọ bụla ka ọ jiri naanị usoro na ngwaahịa gọọmentị kwadoro. ”
Dr. Myriam Sidibe, ọkachamara ahụike ụwa niile na prọfesọ nsọpụrụ nke omume na London School of Hygiene and Tropical Medicine., kwuru, “India arụwo ọrụ dị mma n'ibelata ọrịa ịba na ọrịa dengue n'ime afọ ise gara aga. Ka anyị niile na-agbanwe ndụ anyị iji gbochie COVID-5, mbọ iji belata mmetụta nke ọrịa na-ebute anwụnta kwesịrị ịga n'ihu.
Gọọmentị nwere ike na-akpọ aka niile na oche iji lebara ọrịa COVID-19 anya, mana anyị agaghị akwụsị ogologo mgbasa ozi anyị na-eme megide anwụnta. Mmekọrịta ọha na eze ga-adị oke mkpa n'ibelata ibu ọrụ mmekọrịta ọha na ụba na India n'ihi ịba, dengue na ọrịa ndị ọzọ.
Mmekọrịta ndị a nwere ike ibute ọtụtụ ihe ọhụrụ na ụdị ọmarịcha iji gbochie mgbasa nke ọrịa anwụnta na-ebute. ”
Cuthbert Ncube si na Afrika ndi njemd na-echetara ọrịa ụwa anwụnta na-ebute ka bụrụ ihe iyi egwu maka njem na njem nlegharị anya na Africa, na mmadụ ekwesịghị ichefu mgbe ọ na-aga na nsogbu COVID-19.